Iwholesileli 7-24W eKhethekileyo yeCCT eLungiselelayo ePhantsi uMvelisi kunye noMboneleli |Yakholite
Xa kuhlwa, zonke iintlobo zezibane zikhanyisa ubomi bethu basebusuku.Njengoko iteknoloji ihambela phambili, izibane zihlala zitshintsha.I-Embedded Down Light Fixture inokudala ukukhanya kunye nomoya wethunzi ekhaya, yenza ukuba indawo yonke ibonakale ingekho enye, inomaleko ngakumbi, kwaye inesitayile kakhulu.
I-YOULITE Down Light Fixture inokukunika okuninzi:
EzininziUbushushu bombala:3000K/4000K/6000K, 3 amaqondo obushushu umbala ozikhethelayo, ungakhathazeki malunga nokuba loluphi ubushushu umbala ukukhetha, ilungele ezahlukeneyo iimeko isicelo, ukuhlangabezana neemfuno zakho umoya, kwaye unqande inkathazo ebangelwa ubushushu bombala engafanelekanga.
Easy ukufaka:Izibane ezisezantsi ezihlaziyiweyo zokulungiswa kwekhaya kunye nokulungiswa okutsha: ukusika umngxuma kwisilingi;qhoboshela i-Down Light Fixture kwintambo;yikhusele kwisilingi ngeziqeshana zasentwasahlobo.Ukufakela kunokugqitywa kwimizuzu, ekulungele kakhulu.
BanziRUmsindo weAizicelo:Ukulungiswa kwethu kokuKhanya okuPhantsi kuhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo zamakhitshi, amagumbi okuhlala, amagumbi okulala, iindawo zokusebenza, iindawo zikawonke-wonke, iigaraji, amagumbi angaphantsi, izakhiwo ezitsha, kunye neendawo ezimanzi ezifana nezindlu zokuhlambela kunye namachibi okuqubha.
PA yezindlu:I-Recessed Down Light Fixture inekomityi ye-aluminium yokutshatyalaliswa kobushushu eyakhelweyo, kunye nokutshatyalaliswa kobushushu obugqwesileyo.
7W-24W:I-intshi ezi-3 ukuya kwii-intshi ezi-8 ezigcweleyo, ukuhlangabezana nazo zonke iimfuno zesayizi eziqhelekileyo zaseYurophu nase-Australia.
Zonke iimveliso zokukhanyisa ze-YOURLITE zangaphakathi nangaphandle azikho nje isitayile esihle kodwa zisebenza kakuhle kakhulu.Bagcina imali yakho, bakuvumela ukuba ujabulele nayiphi na imo yokukhanya oyifunayo kwaye bakwenze uzive ulungile.I-YOULITE ikufanele ukuthenjwa!
Ngaphambili Umenzi we-China Linear LED Batten Light Fixture Linear Pendant Light
Okulandelayo UMboneleli othembekileyo waseTshayina ngeXabiso eliPhantsi Umzimba wentsimbi IP20 Umbhobho weLila 0.6m 18W 1.2m 36W AC220V SKD Isiqinisekiso se-LED eBatten Light
Isibane sanamhlanje esiDimayo seCCT esiLungisayo
Ukhuseleko lokusiNgqongileyo Ukukhanya kwe-LED encinci
Umbala weTemp.I-LED ehlengahlengiswayo iRecessed Down Light
Round and Square Optional Optional LED Surfaced Downlight
Akukho Mda weOfisi yokuPhuhlisa isiLungiso
Isibane sangaphandle seDonga, Camping yangaphandle Solar Led Ligh, Izibane zangaphandle&Inkundla, Isibane sangaphandle soKhukula, UkuKhanya kweNtendelezo, Ukukhanya kwangaphandle okukhokelela,